Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : aleksandra
Définition malgache Ny azo atao hoe: isan'ny mpitari-tafika ngeza indrindra sady mpanao tetikady mahay indrindra teto an-tany. Teraka tamin'ny 356, maty tamin'ny 323 talohan'i J.K. tany Babilona [tohiny ambany] [Ravelojaona 1937]
Exemples Aleksandra mpanjaka, miarahaba an'i Jonatasa rahalahiny. [Baiboly: 20:010:018/Makabeo I 10:18..]
Articles Randzavola: Diksionera amin' ny Baiboly: Aleksandra
Zanak'i Filipo II avy any Makedonia sy Olympias. Hita ho nandova ny fahambonian-tsaina avy tamin'ny rainy sy reniny. Hatramin'ny 345 dia ilay tena ngezalahy tamin'ny fahalalana, i Aristota, no nikarakara ny sainy, ka io no nampianatra azy ny karazam-pahalalana rehetra fantatry ny olona tamin'izay, indridra fa ny asan'i Homera. Ny fizarana manao raharaha samy hafa kosa dia nianarany tao an-dapan-drainy, izay nifaneraserany tamin'ireo manamboninahitra sy solontenam-pirenena samy hafa tonga teo. Nanjaka nandimby an-drainy izy nony maty novonoin'olona rainy (336). -- Tamin'ny fivoriana tao Korinto (335) dia nekena ho jeneraliben'ny foloalindahy makedoniana rehetra izy.
Nandresy ny Grika nikomy taminy izy, ary samy nampiasainy tamin'izany na ny hasiahana na ny halemen-panahy. Ny niantombohan'ny ady ngeza nataony an'i Azia Minora, nitondra miaramila an-tongotra 30.000 sy an-tsovaly 5.000. --
Rahefa tonga tany Troade izy dia nanatitra fanatitra ho an'ny ambiroan'i Priam sy Achille (ireo mpiady malaza tantarain'i Homera), vao nandroso hatrany Granique ka nanotohoto ny voalohan-tafika persiana tao.
Tonga tompon'i Azia Minora manontolo izy. Nihoatra ny tendrombohitra Taorosy izy, dia nijanona tao Tarsosy aloha, fa narary mafy. Rahefa nitsangana avy teo ny lehilahy dia nandroso nankany Kilikia ka nanorotoro ny tafik'i Dariosy teo an-tanilemak'Issos. Noreseny hatrany ny moron-tsirak'i Syria.
Tany Foinikia, ny tanàna Tyro, teo amin'ny nosy kely mafy fiarovana, dia nataony fahirano 7 volana, sady nanaovany tetezam-bato mankeny aminy, vao azony.
Farany, afany koa Jerosalema, dia nandroso nankany Ejipta izy; namakivaky ny efitr'i Libia, dia tonga teo am-bavan'ny ony Neily, ary nanorina ilay tanàna malaza nampitondrainy ny anarany hoe Aleksandria.
Tamin'ny lohataonan'ny 331, rahefa nandresy ny moron-tsiraky ny fanjakana teo am-pelatànan'ny Persiana izy, dia niditra tao afovoan-tany.
Nita ny ony Eofatra tao Tapsaque izy; nita koa ny ony Tigrisy, tao akaikin'ny sisa naharavan'ny tanàna Nivive, ary nifanehatra tao Gangamela tamin'ny tafi-baovao vao noforonin'i Dariosy indray. Nanaiky azy avokoa any tanàn-dehibe rehetra, toa an-dry Babilona, Sosana, Persepolisy, Ekbatana.
Notanarahiny eran'i Media sy Baktriana i Dariosy, ka farany dia maty novonoin'olona. Izany no niafaran'ny fanjakam-be voalohan'ny Persiana. -- Nankany India koa Aleksandra. Izy no mpanjaka eoropeana tonga voalohany tany.
Noho ny harerahana amin'ity ady sy dia lava tsy misy farany dia nitokona tsy nety mandeha intsony miaramilany, ka dia tsy maintsy nijanona izy!
Taorian'izany anefa dia mbola nikasa handeha hanafika ny Arabo indray izy, kanjo teo am-piomanana indrindra dia voan'ny tazo.
Hafoloana taorian'ny niandohan'ny aretiny dia nampandalovina tsirairay teo anatrehany nanao veloma azy ny miaramila makedoniana, ary dia maty izy ny ampitson'iny (323) raha tovolahy vao 32 taona monja.
Ny fikasan'i Aleksandra Lehibe. Rahefa dinihana fatratra ny tantarany dia misy zavatra toy izao hita taratra tamin'ny nataony: (1) Nikendry hampiova ny fombam-piainan'ny firenena Tatsinanana ho tahaka ny an'ny Tandrefana izy. Izany noanton'ny nanorenany tanàna sy zanatany grika betsaka hatraiza hatraiza. (2) Nitady hampifangaro ra ny Tatsinanana sy ny Tandrefana izy; koa ny tenany dia nanambady vehivavy Persiana vitsivitsy, ary ny miaramilany (Grika, Makedoniana) marobe dia nampirisihiny na notereny hanao toy izany koa. (3) Raha ny momba ny fitondram-panjakana kosa dia nataon'i Aleksandra fa ny an'ny Persiana no tsara kokoa, ka dia ny an'i Azia no narahiny noho ny an'i Eoropa.
Ny toe-tsainy. Nahatalanjona ny herin-tsain'ity zatovolahy ity. Mendrika azy ny anarana hoe "Lehibe". Fatratra ny fahaizany hitondra tafika sy ny fahitany tetikady hatao. Nanana sitrapo henjana, mahay mampanaiky sy mampakato koa izy, na ny miaramilany na ny fahavalony. Mahaloa-bolana ny herimpony, fa izay rehetra nokasainy dia hainy notontosaina tanteraka sy haingana.
Ny miaramilany dia natoky fa tsy misy tsy ho efany rahefa hataony. (Mba lasa ho azy ao ny saina mahatsiaro (kely) an'i Lehidama).
Ny toe-panahiny. Raha mijery ny toe-panahiny isika dia matroka izy; sady nanarampotamin'ny filan'ny nofo no nisotro toaka. (1) Nihanasiaka izy nony nitombo hery: ny komandiny anankiray izay nanohitra azy dia notaritarihiny velona tao aorian'ny kalesiny mandra-pahapotipotiny; Philota, komandin'ny miaramilany an-tsoavaly dia nampijaliny sy novonoiny noho ny ahiahy fotsiny. (2) Tonga nanandra-tena ho andriamanitra koa Aleksandra nony nisondrotra.
Calisthêne, mpanoratra, olon-kendry grika, nony tsy nety nanaiky azy ho andriamanitra dia nody nolazainy hoe mitetika ka hikomy ka novonoiny.
Tsy mba nanao tahaka andry Périclès sy Epaminonde, izay nitandrina tsara ny toe-panahiny sady nikely aina hanasoa olona nony tafasandratra, izy.
Ary azo inoana fa: vokatry ny fitsiriritany tsy manam-pitsaharana, ny ran-olo-marina nalatsany, ary ny rehaka diso fampana, no nahafolaka andantony azy.
Traduction anglaise Alexander [Baiboly]
Traduction française Alexandre [Baiboly]
Citations Chapitres et versets citant Aleksandra